Madaxweynaha KGS oo Qada sharaf magaalada Muqdisho ugu sameeyay Wasiirada iyo Xildhibaanada ka tirsan JFS[Video/Masawiro]
April 13, 2019 - Written by Editor
Baydhabo:-Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed ( Lafta-gareen ) ayaa Magaalada Muqdisho Ee Caasimadda dalka soomaaliya kullan Qada sharaf ah Ugu sameyay Xildhibaanada Labada Gole Ee Baarlamanka Soomaaliya oo Deegan Doorashadooda ay tahay Deeganada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Kullanka aya waxa ka soo qeyb galey Gudoomiyaha Baarlamanka Koonfur galbeed Soomaaliya Mudane C/qaadir Shariif Sheekhuna Maye ,iyo Xildhibaano ka tirsan Gollaha wakiilada kgs.
Qadasharafta ka dib waxa Mas’uulyiinta ay yeeshen Kullan looga hadlayay sidii dhibaatooyinka ka jira deeganada kgs si wada jir ah wax loogu qaban lahaa.
Xildhibaan Mahamuud macalin yaxye oo Ka Tirsan Gollaha shacabka soomaaliya oo Ku hadlayay Codka Xidhibanada Baarlamanka Soomaaliya Ee laga soo doortey Deeganada Koonfur galbeed ayaa sheegey In waajib nasaaran ay tahay in aan si hufan aan ula shaqeyno Dowladda koonfur Galbeed Soomaaliya uu Hogaamiyo Madaxweyne C/Casiis Xasan Maxamed Lafta gareen .
Madaxweynaha Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane C/Casiis Xasan Maxamed Lafta garen ayaa Xildhibaanada Baarlamanka Soomaaliya Ee laga soo doortey Deeganada Kgs ayaa Warbixin Ka siiyay Xaladaha Deeganada koonfur galbeed ka jira oo ay ka mid tahay biyo yarida .
Qada sharafta ka dib Xildhibaanada Iyo Madaxda Dowlada ayaa yeeshey Kullan saacado badan qaatey kaasi oo lagu gurfeyay Xaladaha deeganada KGS.